ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
ဘ၀မှာ ဒါဟာ ပထမဆုံး ယောက်ျားတယောက်က အင်္ဂါစပ်ကို ကလိပေးတာ ကို ခံဘူးရတာ ။ အင်္ဂါစပ်အတွင်းထဲက တအား ယားလာသည် ။ တခုခုနဲ့ ပွတ်တိုက် ဖြေဖျောက်ချင်မိရအောင်ကို မခံမရပ်နိုင်အောင် ယားတာ ဖြစ်သည် ။ ဒီအချိန်မှာ ကျားဆိုးက အင်္ဂါစပ်ရဲ့ ရသာဖူး အစိလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ငုံပြီး စုတ်လိုက်တာကို ရုတ်တရက် ခံ လိုက်ရသည် ။
“ အို့ …..အား……..အား…….အား……”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တင်ပါးကြီးတွေ မြောက်ကြွသွားသည် ။ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါသွားသည် ။ အဓိက သော့ချက်ကို ထိသွားတာ ။ ကျားဆိုးသည် မိန်းမတွေကို ကိုင်တွယ်နေကျ ကောင်ပါလား ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် သူဟာ အလိုမတူဘဲ အတင်း ကျင့်ကြံနေသည်လို့ စိတ်ထဲမှာ မရှိတော့ဘဲ သူမကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ လူတယောက် လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်မြင်သွားရပြီ ။ ပေါင်တန်တွေကို အစွမ်းကုန် ဖြဲကားလိုက်မိပြီး သူ့ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို ထပ် ပြီး ရလေမလားလို့ မျှော်လင့်လိုက်မိပြီ ။
မျှေ်ာလင့်ထားတဲ့အတိုင်း ကျားဆိုးရဲ့ လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ အကွဲကြောင်းကို ယက်လာသည် ။ အရိုးများတယ် ချေးခါးတယ်နဲ့ ကျောင်းသူဘ၀ထဲက ယောက်ျားတွေကို ရွေးခဲ့လို့ အပျိုကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် ကျော်ကြားတဲ့ ရှေ့နေမကြီး တယောက် ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့တော့လည်း တော်ရုံ ယောက်ျားတွေက သူနဲ့ တန်တယ် လို့ မထင်တော့ဘဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်လွန်ခဲ့သည် ။
အပျိုကြီး ဘ၀မှာ ငယ်ငယ်ထဲက ကြားဖူးခဲ့တဲ့ ခရမ်းသီးတောင့် ထိုးထည့်ပြီး အာသာဖြေတဲ့နည်းကို လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ခဲ့မိသည် ။ သဘာဝစိတ် ပြင်းပြစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ဆန္ဒမီးကို ချက်ချင်းဘဲ ငြိမ်းသတ်ချင်မိရပြီးယားယံတဲ့ ဝေဒနာကို ခရမ်းသီးတောင့်နဲ့ ဖြေဖျောက်ပစ်မိသည် .။ ဒါကို သိတဲ့ သူငယ်ချင်းက နိုင်ငံခြားက အပြန်မှာ ပါလာတဲ့ ရာဘာလိင်တန်ချောင်းကို သူမဆီကို ပို့ပေးလိုက်တာ ဖြစ်လေသည် ။
ကျားဆိုးသည် ဖူးကြွမို့မောက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို အပီအပြင် ယက်ပေးနေသည် ။ တခါတခါ သူ့လျာကြီးသည် နယ်ကျွံပြီး ကပ်ရက်မှာ ရှိနေတဲ့ စအိုပေါက် ညိုညိုလေးကိုပါ ခလုပ်တိုက် ယက်ပေးသွားသည် ။ မတော်တဆ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အကြံသမား ကျားဆိုးသည် ဒေါ်မိုမိုးရှိန်းရဲ့ စိတ်တွေ တအားထကြွအောင် လုပ်ပေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည် ။ အင်္ဂါစပ်ကို စပ်ယှက်အပြီးမှာ စအိုကိုလည်း စပ်ယှက်ချင်လို့ အစပျိုးနေတာလည်း ဖြစ်နိုင် သည် ။
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် ကျားဆိုး ယက်ပေးနေတာတွေကို အလူးအလဲ ခံစားနေမိရင်း သူ ဆက် မယက်တော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်း လိုက်မှာကိုတောင် စိုးကြောက်နေမိပြီ ။ ကျားဆိုးက မရပ်မနား ယက်ပေးနေသလို စအိုပေါက်လေးကိုလည်း လက်ညှိုးနဲ့ ကလိပေးနေပြန်သည် ။ တော်တော်လေး ကြာအောင် ယက်စုတ်အပြီး ကျားဆိုးသည် ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကနေ သူ့ပါးစပ်ကို ခွာလိုက် သည် ။ ကုန်းယက်နေရာက ထထိုင်လိုက်သည် ။
အသည်းအသန် ကောင်းနေရာက ကျားဆိုးရဲ့ ဘာဂျာမှုတ်တာတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားလို့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တယောက် မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး တအင်းအင်းနဲ့ ညည်းနေရာက“ ဘာလို့ သူရပ်လိုက်ပါလိမ့် ” လို့ တွေးရင်း မျက်စိတွေကို မသိမသာလေး ဖွင့်ကြည့်မိတဲ့ အခါ အရမ်းကို တုန်လှုပ်သွားသည် ။ မှိုပွင့်ပုံ ဒစ်ကားကားကြီးသည် သူမ ပါးစပ်ပေါက်နားကို ကပ်ရက်ကြီး ရောက်ရှိနေလို့ပါ ။
“ ကဲ…မမ….မမကို ကျနော် မှုတ်ပေးပြီးပြီ.. ဒီတခါက မမ အလှည့်….မမ ကျနော့်ကို မှုတ်ပေးရမယ်….”
သူ့လေသံက မာသည် ။ အမိန့်ပေးနေတဲ့ အမိန့်သံ ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် အဖုအထစ်ကြီးတွေနဲ့ အကြောကြီးတွေ အပြိုင်းပြိုင်း ထောင်ထနေတဲ့ လုံးပတ်တုတ်တုတ် လိင် တန်ကြီးကို ငုံစုတ်လိုက်ဖို့ ၀န်လေးနေသည် ။ တခါမှ ယောက်ျား လိင်တန်ကို စုတ်ဖို့ နေနေသာသာ ကိုင်တောင်မကိုင်ဖူးခဲ့ဘူးလေ ။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ရည်းစား လည်း မဟုတ် ။ မုဒိန်းမှုနဲ့ အဖမ်းခံရပြီး တရားစွဲခံနေရတဲ့မုဒိန်းကောင် တရားခံ တယောက် …. အချုပ်ကနေ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာတဲ့ တရားခံပြေး တယောက် ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို စုတ်ဖို့က ၀န်လေးလျက် နေသည် ။
“ ဘာငိုင်နေတာလဲ…ငုံလိုက်လေ..လီးကို စုတ်ဖို့ ပြောနေတာ ဘာဝန်လေးနေတာလဲ…… စုတ်လိုက်လေ ..”
ကျားဆိုးရဲ့ အသံက ပိုမာလာသည် ။
“ စုတ်လိုက်…မစုတ်ရင် နားရင်း အုပ်လိုက်မယ်…..”
လက်နဲ့ပါ ရွယ်လိုက်တာကြောင့် ကြောက်လန့်ပြီး သူ့လိင်တန်ထိပ်ပိုင်းကို ငုံလိုက်ရသည် ။
ငံကျိကျိ အရသာ အောက်သိုးသိုး အနံ့ကြီးကို အောင့်အည်းပြီး စုတ်လိုက်ရသည် ။
ကျားဆိုးက လိင်တန်ကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ပါးစပ်ထဲကို ဖိထိုးသွင်းလိုက်သည် ။
“ အု …”
ကျားဆိုးရဲ့ လိင်တန် တချောင်းလုံး အဆုံးအထိ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ၀င်သွားသည် ။ လိင်တန်ရဲ့ အဆုံး ဆီးစပ်က အမွှေးမဲမဲ ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ နှာခေါင်းထိပ် ထိကပ်သွားတဲ့အထိ ..။
ကျားဆိုးရဲ့ တုန်တုန်ခါခါ အသံကြီး ထွက်လာသည် ။ သူ့အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ရဲတဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် သူခိုင်း တာကို ချက်ချင်းဘဲ လုပ်ပေးလိုက်သည် ။ သူ့လိင်တန်ကြီးကို ရေခဲချောင်းတချောင်းကို စုတ်သလို အားရပါးရ စုတ်ပေးလိုက်တာပါ ။
“ အား..ခင်ဗျား မဆိုးဘူး……ကောင်းတယ်…. အဲ့တိုင်း.. စုတ်…စုတ်..ခင်ဗျား အရင် လီးစုတ်ဖူးလား……”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း သူခိုင်းတာကို တာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့ လုပ်နေတာမို့ ပါးစပ် မအားဘူး ။ သူမေးတာကို မဖြေနိုင် ။ သူက သူ့လိင်တန်ကို ကော့ထိုးပြီး..
“ ဟိတ်..မေးနေတယ်လေ….အရင်က လီးစုတ်ဖူးလား လို့..”
လို့ ခပ်ငေါက်ငေါက်နဲ့ ထပ်မေးသည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း ခေါင်းခါပြလိုက်သည် ။
“ ခင်ဗျား ..မဆိုးဘူး…..တခါမှ မစုတ်ဖူးတာတောင် လီးစုတ်တာ ကောင်းတယ်….”
လို့ ချီးမွမ်းလိုက်သည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း လိင်တန်အ၇င်းကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကျကျနန စုတ်နေမိသည် ။ ကျားဆိုးက
“ ဘော တွေကိုလည်း လက်နဲ့ ဆုပ်ပေးစမ်း….”
လို့ ပြောလိုက်လို့ တွဲလောင်း ကျနေတဲ့ လဥကြီး နှစ်လုံးကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်နယ် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရသည် ။ သူစုတ်နေတုံး ကျားဆိုးသည် သူ့လိင်တန်ကြီးကို ကော့ထိုးပြီး ညှောင့်လာလို့ စုတ်နေတာနကြ မတူတော့ဘဲ ပါးစပ်ကို လိင်ဆက်ဆံနေတာနဲ့ တူနေသည် ။
“ အား…..အား…….အီး…….ကောင်းတယ်……… ကောင်းတယ်…..ဟား…..စုတ်..စုတ်… လျာကို ကစားပေး……”
ဒီအချိန်မှာ အိမ်ခန်း တံခါးပေါက်က လျှပ်စစ်ခေါင်းလောင်းသံ တင်တောင်..တင်တောင်… ဆိုပြီး မြည်လာသည် ။ ကျားဆိုး ဆတ်ကနဲ တုန်သွားသည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း လိင်တန်ကို ပါးစပ်ထဲက ထုတ်ချွတ်လိုက်သည် ။
“ ဟာ….လူ…လူ……လူလာနေတယ်……. ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်သူလာလဲ ခင်ဗျား သိလား……”
“ မသိဘူး . . ”
“ ည၀တ် အင်္ကျီ ပြန်ဝတ်လိုက်စမ်း…… မြန်မြန်….. ပြီးတော့ သွားကြည့်… ချောင်းကြည့်ပေါက်လေးကနေ ကြည့်လိုက်…”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် သူခိုင်းတာကို ချက်ချင်း လုပ်သည် ။ ည၀တ်အင်္ကျီလေးကို ကောက်ယူဝတ်… အပြင်ခန်းကို ထွက်သည် ။ ဒူးတွေက ချောင်နေသည် ။ ခြေလှမ်းတွေက မမှန်ချင် ။ ကျားဆိုးသည် သားလှီးဓါးကြီး တချောင်း ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူနဲ့ ထပ်ချပ်မကွာ အနောက်က ပါလာသည် ။ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကို လက်ညှိုးနဲ့ ပြသည် ။ လေသံနဲ့..
လို့ ပြောသည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ကြည့်လိုက်တော့ အပြင်မှာ ရောက်နေတာက ရဲမှူး ကျော်စွာအောင် ဖြစ်နေသည် ။ ကျားဆိုးကို လေသံလေးနဲ့
“ ဖုန်း ကားပေါ် ကျန်ခဲ့လို့ လာပေးတာ…”
လို့ ပြောပြလိုက်တော့ ကျားဆိုးက
“ တံခါးကို ဟတယ် ဆိုရုံ ဖွင့်ပေးပြီး ဖုန်းကို ယူလိုက်.. မျက်နှာ မပျက်နဲ့နော်..သူ ၀င်လာလို့ကတော့ ဓါးနဲ့ ခင်ဗျား လည်ပင်းကို တဆုံး ထိုးသွင်းလိုက်မှာ….”
လို့ ပြောလို့ ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်ပြီး တံခါးကို အသာလေး ဟတယ်ဆိုရုံ ဖွင့်လိုက်သည် ။ ကျားဆိုးက တံခါးအကွယ်ကနေ သားလှီးဒါးကြီးနဲ့ နောက်ကျောပြင်ကို တေ့ထောက်ထားသည် ။
“ ဟုတ်.. အားနာစရာကြီး…..ကျေးဇူးဘဲနော်…”
ဖုန်းကို လက်နဲ့ လှမ်းယူလိုက်တုံး ကျော်စွာအောင် သည် သူ့ရင်ဘတ်နေရာကို ကြည့်နေတာကို သိလိုက်သည် ။
“ ဟင်း…ဟိုလေ..ကျမ ရေချိုးမလို့ လုပ်နေလို့.. ဆောရီးဘဲနော်…အထဲကို မခေါ်ဖိတ်တော့ဘူး… မနက်ဖန်မှ တွေ့မယ်…”
“ ရတယ်..ရတယ်….မိုးရှိန်း..ဆီးယူး… ဆီးယူး…….”
ည၀တ်အင်္ကျီက ပါးလွန်းလို့ သူ့နို့ကြီးတွေကို အတိုင်းသားလို သူ တွေ့သွားပြီ ။ ရှက်ရှက်နဲ့ တံခါးကို အမြန် ပြန်ပိတ်လိုက်သည် ။ သွားပြီ …။ ကယ်တင်နိုင်တဲ့ တယောက်နဲ့ ဝေးသွားပြီ ။ အနောက်က ဓါးနဲ့ ထောက်ထားတာကို ခံနေရတာမို့ ကျော်စွာအောင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အကူအညီ တောင်းလို့ ရမလဲ ။
ကျော်စွာအောင် လည်း မထင်မှတ်ဘဲ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ဆူဖြိုးတဲ့ ရင်သားစိုင်လုံးကြီးတွေကို ရိုးတိုးရိပ်တိပ် မြင်လိုက်ရသည် ။ ဘရာ မပါဘဲ ည၀တ်ပါးပါးလေးကို ၀တ်ထားတာ ။ တံခါးကို နည်းနည်းလေးဘဲ ဟရုံ ဖွင့်ပေးပေမယ့် သူ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သည်။ ဟူး…တအား လှတာဘဲ . . .။ မျက်စိထဲက တော်တော်နဲ့ မထွက်ဘူး ။ ဓါတ်လှေခါးက ဆင်းသွားသည့် အချိန်မှာတောင် မြင်ယောင်မိနေဆဲ ။
“ ပေးစမ်း..အဲ့ဖုန်း . . .”
ကျားဆိုးက ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ လက်ထဲက ဖုန်းကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲလုယူလိုက်သည် ။ ကျားဆိုးသည် ကိုယ်လုံးတီးကိုယ်ကြီးနဲ့ လိင်တန်တုတ်ရှည်ကြီးက မတ်ထောင်လျက် ဓါးကြီးကိုင်ထားရင်း ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ဖုန်းကို လေ့လာနေသည် ။
“ ကဲ…ဇာတ်လမ်း ဆက်ရအောင်…….ခင်ဗျား စုတ်ပေးတာ စောက်ရမ်း ကောင်းတယ်….. လာ ဆက် စုတ်အုံး…”
ဧည့်ခန်းက နီညိုရောင် သားရေဆိုဖါရှည်ကြီးမှာ သူ ပက်လက်လှန် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ပေါင်ကို ကားဖြဲလိုက်သည် ။
“ လာ..လာ..ဒီမှာ ထိုင်….လီးကို စုတ်…..”
သူ့ရဲ့ လိင်ကျွန် ဘ၀ကို သက်ဆင်းသွားရတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ၀မ်းနည်းသလို ခံစားလိုက်မိသည် ။ သို့ပေမယ့် သူနဲ့ ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ.. သူပေးလာတဲ့ ကာမ အထိအတွေ့တွေက ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တချိန်လုံး တောင့်တလိုလားနေခဲ့တာတွေ ဖြစ်နေရပြန်သည် ။ သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ လူရွယ် တယောက်ရဲ့ ကျစ်လစ်တဲ့ ကိုယ်… တုတ်ခိုင်ရှည်လျားတဲ့ မြင်တာနဲ့ စိတ်တွေ ယစ်မူးရတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို အားရပါးရ စုတ်နေယက် နေရတာကလည်း တကယ့်ကို ထူးကဲနေသည် ။
လူဆိုးမုဒိန်းကောင် မဟုတ်ဘဲ လူကောင်း သူကောင်းလေးသာ ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလေမလဲ လို့လည်း ဖျတ်ကနဲ စဉ်းစားမိလိုက်သည် ။ လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီးကို စုတ်နေရတာက ပါးစပ်တွေ နှုတ်ခမ်းတွေတောင် ထူပူလာရသည် ။ ဒီကောင်က မျက် စိပိတ်ပြီး အရသာခံ ငြိမ်နေသည် ။
“ အူး….တအားမိုက်တယ်…..တော်တော့…. တော်တော့…..”
လိင်တန်ရှည်ကြီးကို ပါးစပ်က ချွတ်လိုက်တော့ ကျားဆိုးက
“ ည၀တ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်စမ်း….”
လို့ မျက်နှာ ထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်လို့ သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း ချွတ်ပစ်လိုက်ရသည် ။ သူရောကိုယ်ပါ ကိုယ်တုံးလုံးတွေနဲ့ ဧည့်ခန်းက ဆိုဖါမှာ ရှိနေသည် ။
“ ခင်ဗျား..ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေတဲ့ အကြောင်းတွေကို ကျုပ်ကို ပြောပြစမ်း…. မညာနဲ့နော်…. ညာတယ် ထင်ရင် နားရင်းအုပ်မှာ….. ကဲ ပြော….”
ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ ပြင်နေလို့ သူ့ကို
“ ဗီဒီယိုတော့ မရိုက်ပါနဲ့ကွာ…ပြောဆို ပြောပြပါ့မယ်….”
လို့ ပြောလိုက်မိ သည် ။ သူက
လို့ ခပ်မာမာ ပြောလိုက်သည် ။ ပေါင်ဖြဲလိုက်တာနဲ့ သူ့လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ပူးပြီး စောက်ဖုတ်ပေါက်ထဲကို ထိုးသွင်းတော့တာဘဲ ။
အရည်တွေက တအား ထွက်ယိုပေနေတော့ သူ့လက်ချောင်းတွေက စောက်ဖုတ်ထဲကို တိုးဝင်သွားကြသည် ။
“ ကဲ ပြော…ဗီဒီယို မရိုက်ဘူး..ပြော.. ခင်ဗျား.. ဘယ်အရွယ်ထဲက ကိုယ့်ဖါသာ အာသာဖြေလဲ…. ဖြေ……ဖြေ…….”
“ အတိအကျတော့ မမှတ်မိဘူး..ဆယ်ကျော်သက် အချိန်က ..အပျိုဖေါ်ဝင်ခါစကပေါ့….”
“ ဘယ်လိုလုပ်သလဲ..လက်နဲ့ ပွတ်တာလား.. ဘာသုံးသေးလဲ..ခရမ်းသီးတွေ ဘာတွေ သုံးလား….”
“ လက်နဲ့ဘဲ ပွတ်တာပါ…ဘာမှ မသုံးပါဘူး …”
“ အပြာကား ကြည့်ဖူးလား…ဘယ်တုံးက စပြီး ကြည့်ဖူးလဲ…..”
“ ကျောင်းသူ ဘ၀တုံးထဲက ကြည့်ဖူးတယ်… သူငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့….”
ဒီအချိန်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲကို ရောက်နေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေက အသွင်းအထုတ်တွေ လုပ်နေသည် ။
သူ့လိင်တန် ပူပူနွေးနွေးကြီးကို ကိုင်လိုက်ရပြန်သည် ။
“ လာ…အပေါ်က တက်ထိုင်စမ်း..လီးပေါ်ကို တက်ထိုင်…..”
ယောက်ျားနဲ့ တခါမှ လိင်မဆက်ဆံဘူးတဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် သူ့လိင်တန် တုတ်တုတ် ရှည်လမျောကြီး အပေါ်ကို တက်ထိုင်ဖို့ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားရသည် ။
“ ဘာလို့ မဖြစ်ရမလဲ…..”
“ ဟို..ဟို….ငါ့..ငါ့….ဟာ ကွဲပြဲသွားမယ်ကွယ်……. မင်းဟာကြီးက ကြီးလွန်းတယ်…..”
ကျားဆိုးက တဟီးဟီးနဲ့ သဘောကျနေသည် ။ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်ပြီး သူ့လိင်တန်ကြီးကို အရင်းက ဆုပ်ကိုင် ပြီး ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း မျက်နှာကို တဖတ်ဖတ်နဲ့ ရိုက်လိုက်သည် ။ ပါး တဖက်တချက်ကို လိင်တန်နဲ့ ရိုက်နေတာက ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းအတွက် ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှသိ လို့ ဆိုရမယ့် အတွေ့အကြုံ အသစ်အန်း တခုပါ ။ ကျားဆိုးက ကြည်စားသလို လုပ်နေတာ ဖြစ်သည် ။
“ ဟီးဟီး..ခင်ဗျား..နောက်ကျရင် ကျုပ်လီးကြီးကို သတိရနေမှာပါ ..ခင်ဗျား ကြိုက်သွားမှာပါ.. ဒင်ပြည့်ကြပ်ပြည့် ခင်ဗျား စောက်ခေါင်းနံရံတွေကို ပီပီပြင်ပြင် ပွတ်တိုက်ပေးမယ့် ဒင်ကြီး…..”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း ကျားဆိုးရဲ့ ပက်စက်တဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် နားရှက်သလို ခံစားလိုက်မိသည် ။ ဒါပေမယ့် သူ့လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေတာမို့ သူ သွန်လိုသွန် မှောက်လိုမှောက် လုပ်တာတွေကို ခံရမယ့် ကိုယ့် ဘ၀ …။
“ ခင်ဗျား..ကျုပ်လီးကို ကိုင်တဲ့အချိန် စောက်ရည်တွေ တအား ထွက်တယ် မဟုတ်လား….”
“ ပါးစပ်က ဖြေစမ်း….”
လို့ ဖြေလိုက်ရ သည် ။
“ ခံချင်စိတ်တွေကော ပေါက်လား..ခင်ဗျား စောက်ပတ်ထဲက ယားလား…..”
“ အင်း ပေါက်တယ်…ယားလည်း ယားတယ် …. ”
“ ကဲ..ကဲ…ဆိုဖါပေါ် ပက်လက်လှဲ ပေါင်တွေ ကားဖြဲပေး…ခင်ဗျားကို လိုးမယ်…..”
ဒီလို ဆိုတော့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တအားကို လန့်မိသည် ။ တကယ်တမ်း တခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ သူမသည် ကျားဆိုး က သူမ အပျိုစင်ပန်းပွင့်ကို ချွေတာကို ခံရတော့မည် မဟုတ်လား ။
“ ဖြစ်လွန်းလို့ သိပ်ဖြစ်..ကျုပ်က တခြားကောင်မတွေကို တအား အတင်း တက် မကျင့်ဘဲ ချစ်သူ ရည်းစားကို လိုးသလို လိုးပေးမလို့.. ခင်ဗျားရဲ့ အပျိုစစ်စစ် စောက်ဖုတ်ကို မကွဲမပြဲဘဲ အရသာထူးရအောင် ချော့ပြီး လိုးပေး မလို့.. ခင်ဗျား ကြိုက်သွားစေရမယ်…လာ…လာ…. ပေါင်ဖြဲပေး…..”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း သူခိုင်းသလို ဆိုဖါမှာ ပက်လက်လှန် ပေါင်ဖြဲပေးလိုက်ရသည် ။ မျက်စိစုံမှိတ်ထားလိုက်သည် ။ သူ့ လိင်တန်ကြီး ထိုးသွင်းမှာကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေတုံး လာထိလိုက်တာက သူ့လျာကြီး ဖြစ်နေသည်။ သူ..သူ….စောက်ဖုတ်ကို လျာပြားကြီးနဲ့ ယက်နေပြန်သည် ။
သူ့လျာကြီးက ရသာဖူး အစိလေးကို အပီအပြင် ဖိဖိ ယက်မိနေသည် ။ အမလေး…….အူး……..အီး……. ခံချင်စိတ်တွေက တအား ဖြစ်နေပြီ ။ စောက်ဖုတ်ထဲက တအား ယားသည် ။ လိင်တန်နဲ့ ထိုးဆောင့်တာကို ခံ ချင်လာသည် ။ အင်း..ဒီလို ခံချင်လာအောင် ကျားဆိုးက ချက်ချင်း မလိုးသေးဘဲ လျာနဲ့ ကုန်းယက်နေတာ ဖြစ်သည် ။ တအား လိုလားတဲ့အချိန်မှာကျမှ သူ့လီးတန်ကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးနှစ် လိုးပေးချင်လို့ပေါ့ ။ သူ ဖြစ်စေချင်စေလို ဖြစ်လာသည် ။
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် သူ ယက်ပေးတာတွေကြောင့် စိတ်တွေ အရမ်းကြွထနေပြီ ။ ယက်တာတွေကို ရပ်လိုက်ပြီး ထည့်ဖို့ လုပ်ပြီ ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို ဆွဲဖြဲကားလိုက်သည် ။ ယောက်ျားနဲ့ တခါမှ မစပ်ယှက်ဖူးသေးဘူး ဆိုတဲ့ အပျိုကြီး မမရဲ့ မို့ဖေါင်းတဲ့ ဆီးခုံကြီးနဲ့ဟက်တက်ကွဲ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်ရင်း တက်ခွလိုက်သည် ။
သူ့ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေတဲ့ လိင်တန်ဆာကြီးကို ဒီ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲကို ချက်ချင်း ဖိမသွင်းလိုက်သေးဘဲ လှလှပပကြီး ကြွထောင်နေတဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ နို့ကြီး နှစ်လုံးကို စိတ်ကြိုက် ဆုပ်နယ် ညှစ်ပေးလိုက်သည် ။ စူထောင်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက စိတ်ထကြွနေလို့ မာတင်းပြောင်နေကြသည် ။ သူ့နှုတ်ခမ်းကြီး တွေနဲ့ ငုံစို့ပေးနေရင်း
“ ခင်ဗျားကြီးက လီးစစ်စစ်နဲ့ အလိုး မခံဖူးဘူး ဆိုပေမယ့် ခရမ်းသီးတောင့်လို ဟာနဲ့တော့ အယားဖြေ အာသာဖြေဘူးခဲ့တယ် ဆိုတော့ အစိမ်းသက်သက်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး … အင်း..ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ….. အဆင်ပြေအောင် ချောဆီတော့ သုံးပြီး လိုးမယ်…..ခင်ဗျားကို မုဒိန်းကျင့်သလို မလိုးဘူး..ချစ်သူ ရည်းစားတွေလို ရရချင်း ညားညားချင်း ကြင်စဦးတွေလို လိုးပေးမှာ….. ခင်ဗျားကို ကျုပ် သတ်မပစ်ပါဘူး..ခင်ဗျား တိုင်ချင်သပဆိူ တိုင်……ခင်ဗျားလို နံမည်ကြီး ရှေ့နေမကြီး တယောက် အနေနဲ့ ကျမကို ကျားဆိုး ဆိုတဲ့ အကောင်က မုဒိန်းကျင့်ပါ တယ်လို့ တိုင်လိုက်တာနဲ့ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်မှာ…. ခင်ဗျား သဘောပါ..ကျုပ်ကတော့ တတက်စားလည်း ကြက်သွန်…. နှစ်တက် စားလည်း ကြက်သွန်ဘဲလေ… မထူးဘူး…..ကျုပ်က ထောင်မကြောက်တဲ့ကောင်….”
လို့ ပြောလိုက်ရင်း သူ့တန်ဆာကြီးကို ဘူးဘေးတဘူးထဲက ဆီတွေကို လိမ်းကျံလိုက်ပြီးမှ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ အကွဲကြောင်း တလျောက် စုန်ချီ ဆန်ချီ အပေါ်အောက် ပွတ်တိုက် လိုက်သည် ။
မှို ပွင့်ပုံစံ ဒစ်ကားကားကြီးနဲ့ ထိုးတိုက်တာကို ခံလိုက်ရလို့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တအားကို ဖီလင် တက်သွားသည် ။ ငေါက်တောက် ထောင်ပြူနေတဲ့ အစိလေးကို ဒစ်ကားကြီးက ထိုးကလော် မိသွားတာမို့ ။ ကျားဆိုး ပြောမှဘဲ သူမသည် ကျားဆိုး အနိုင်ကျင့်တာကို တိုင်သင့် မတိုင်သင့် စဉ်းစားရပြီ ။ သူပြောသလိုဘဲ တိုင်လိုက်ရင် တိုင်းကျော်ပြည်ကျော် နံမည်ကြီးသွားမည် ။ လူထဲထဲ တိုးဖို့ မလွယ်တော့ ။ လူတိုင်း ပါးစပ်ဖျားမှာ သူမ မုဒိန်းအကျင့်ခံရတယ် ဆိုတာ ပြောကြတော့မည် ။ မီဒီယာ စာနယ်ဇင်း သတင်းတွေထဲ ပါတော့မည် ။ ဂျာနယ်တွေ ရောင်းကောင်းတော့မည် ။ တိုင်လို့ မဖြစ်ဖူး ထင်တယ် ။
ဒစ်ပြဲလုံးကြီးကို ဖိသွင်း ထိုးမြုပ်လိုက်လို့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ပါးစပ်လေး ဟပြီး အသံထွက်သွားရသည် ။ ဆီတွေ သုတ်လိမ်းထားတဲ့ ကျားဆိုးရဲ့ လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီးသည် ခဲယဉ်းမှု သိပ် မရှိလှဘဲ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲကို တိုးဝင်သွားသည် ။ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ရုန်းဖို့ နောက်ဆုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် သန်မာတဲ့ ကျားဆိုးရဲ့ လက်တွေက ဖမ်းချုပ်ထားတာကြောင့် သူ့လိင်တန်ကြီးကို လက်ခံလိုက်ရသည် ။
လိင်တန်ကြီးသည် တင်းကြပ်ပေမယ့်အဆင်ပြေပြေနဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့အင်္ဂါစပ် အတွင်းထဲကို ၀င်နိုင်သည် ။ အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက် တိုးဝှေ့ ၀င်ရောက်သွားကြတာမို့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရအောင် အရသာတွေ ထူးသွားရသည် ။
“ အိုကေတယ် မဟုတ်လား….စောက်ဖုတ်နဲ့ လီး ဆိုတာ မတော် မတ်တာ မရှိဘူး….စောက်ဖုတ် ဆိုတာ ရော်ဘာလိုဘဲ…..လီး ဘယ်လောက် ကြီးကြီး… အသွင်းခံနိုင်တယ်..အင်း..ချောဆီ သုံးရင်တော့ ပိုပြီး အဆင်ချောတာပေါ့ဗျာ…..”
ကျားဆိုး လိုးပြီ ။ နို့ကြီးတွေကို ကိုင်ညှစ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း တချက်ချင်း လိုးသွင်းနေသည် ။
( ပြိ…ပြတ်…ပြိ…ပြတ်…စွိ ….စွိ…)
ကျားဆိုးရဲ့ ဂွေးစိကြီး နှစ်လုံးက လိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ဖင်ကြားကို တဖတ်ဖတ်နဲ့ ပြေးပြေး ရိုက်သည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် ယောက်ျား အထိအတွေ့ကို လိုလားခဲ့တာကို သမာဒေ၀ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သိမြင်သွားကြပြီး သူမအလိုကို လိုက်လျောတဲ့အနေနဲ့ လီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျားဆိုးကို သူမ တိုက်ခန်းကို ပို့လိုက်လေသမလား လို့ ထင်မှတ်ဖွယ်ရာ ရှိသည် ။
ကျားဆိုးသည် မုဒိန်းကောင် လူဆိုးတကောင် ဖြစ်ပေမယ့် ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းကို အတင်း အကြမ်းဖက် မကျင့်ဘဲ အေးအေး ဆေးဆေးနဲ့ သမီးရည်းစားတွေလို ဆက်ဆံပေးတဲ့အတွက် ဒေါ်မိုးမိုးးရှိန်းသည် ကာမ အရသာကို တင်ပြည့်ကြပ်ပြည့် ခံစားနေရပေသည် ။
“ ကောင်းလား..ကျုပ် လိုးပေးတာ ကောင်းတယ် မဟုတ်လား…ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း…”
တကယ်တော့ အီဆိမ့်နေအောင် ကောင်းလှသည် ။ သူလိုးဆောင့်တိုင်း အောက်ကနေ ပြန်ပင့်ကော့ပေးမိရသည် ။ သူလည်း သိနေသည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း တယောက် တုံ့ပြန်ချက်တွေ ပြန်ပေးနေတယ် ဆိုတာ ။ ဘာလို့ မေးနေရတာလဲ…။
“ ဟိတ်..မေးတာကို ဖြေလေ..ကျုပ် ပြောထားတယ် မဟုတ်လား..မေးရင် ချက်ချင်းဖြေ….. ဒီအရွယ်ကြီး ရောက်မှ ရိုက်နှက် ဆုံးမရရင် မကောင်းဘူး…..”
“ ဘာ…ဘာ…ဘာကို ဖြေရမလဲ..”
လို့ ပြန်မေးလိုက်သည် ။
“ ကျုပ် လိုးပေးတာ ကောင်းလားလို့ မေးတာ….”
“ ကောင်းတယ်…..အရမ်း ကောင်းတယ်…..”
ကျားဆိုး ပြုံးသွားသည် ။ ကျေနပ်သွားသည် ။
သူ့ကို ကြောက်လို့လား…သူလုပ်တာတွေကို ကြိုက်လို့လား မသိဘူး..လိုလိုချင်ချင်နဲ့ အင်း လို့ ဖြေမိသည် ။ ချက်ချင်းဘဲ လေးဖက်ကုန်းပေးလိုက်မိသည် ။ ကျားဆိုးက ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ခါးကို လက်နဲ့ ဖိချပြီး အနေအထားကို ပြင်ပေးသည် ။ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားအောင်လို့ ။ စွင့်ကားနေတဲ့ ဖင်တုံး ဖြူဖြူကြီးတွေ ကြားက ဖေါင်းပြူး ထွက်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးက အရည်တွေ စိုစိုရွှဲလို့ ဖေါင်းကြွနေသည် ။
ကျားဆိုးလည်း ယောက်ျားလီး တခါမှ မ၀င်ဘူးသေးတဲ့ စောက်ဖုတ်လှလှ ကြပ်ကြပ်ကြီးကို စိမ်ပြေနပြေ လိုးရလို့ တအာျးနေ့ပ် ဂုဏ်ယူနေမိရာက အခုလို ဖင်ကုန်းဖင်ပူးတောင်းထောင်ပေး ပြန်တော့ အရသာပိုထူးအောင် လိုးရပြန်ဦးမည် ဆိုပြီး သဘောကျသည် ။ ဖင်တုံးကြီးကို ဖျန်းကနဲ ၇ိုက်ထည့်လိုက်သည် ။
“ အိုး..ဘာလို့ ရိုက်တာလဲကွာ..ကုန်းဆို ကုန်းပေးတာကို….”
“ ခင်ဗျား ဖင်ကြီးတွေနဲ့ စောက်ဖုတ်က လှလွန်းလို့ သဘောကျပြီး ရိုက်မိတာပါ..ခင်ဗျားကို အခုလိုဘဲ တသက်လုံး လိုးသွားချင်မိတာဘဲဗျာ……မဖြစ်နိုင်မှန်း သိပေမယ့် စိတ်ထဲ အဲလို ဖြစ်မိတယ်…”
ကျားဆိုးရဲ့ လက်ညှိုးတချောင်းက စအိုပေါက် နီညိုညိုလေးကို တို့ထိပြီး အသာ ပွတ်ပေးနေသည် ။
“ အို့..ဘာလို့ ဖင်ပေါက်ကို လာကလိနေရတာလဲကွာ…. မရွံဘူးလား….”
“ ဟင့်အင်း..မရွံဘူး..ဒီလိုတောင် လုပ်ပေးအုံးမှာ……”
ကျားဆိုးက စအိုပေါက်လေးကို လျာကြီးနဲ့ ထိုးလိုက်သည် ။
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ကြက်သီးတွေ ထပြီး ဖင်ကြီးတွေ တုန်ခါသွားရသည် ။ လျာထိပ်နဲ့ စအိုပေါက်ကို ထိုးဆွနေလို့ ။
“ ကြိုက်တယ်ကွာ..ခင်ဗျား ဖင်ပေါက်ကို စုတ်ချင်တယ်…..”
“ ငြိမ်ငြိမ်နေ…..အေးဆေး ခံစမ်း…..”
သူ..သူ..သူ…ကျားဆိုး..တော်တော် ဆိုးတဲ့ကောင်…။ ဖင်ကို ယက်လိုက် စုတ်လိုက် လုပ်ပေးနေသည် ။ သူလုပ်တာနဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း အရည်တွေ တအား ထွက်ကျနေရပြီ ။ သူ့ကို လိုးပေးပါတော့လို့ ပြောမိတော့မည် ။ ယားလွန်းနေပြီ ။ သူက အလိုက် တသိနဲ့ စ လိုးပေးပါသည် ။ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ပေးထားတဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲက ဝိုင်းစက် စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တုံးကြီးတွေကို အပေါ်က တက်ခွပြီး မြေစိုက်လိုးနည်း နဲ့ လိုးပေးတာ ။
တုတ်တုတ်ညိုညို လိင်တန်ကြီးက စွပ်ကနဲ စွပ်ကနဲ အင်္ဂါစပ်ထဲကို အဆက်မပြတ် ၀င်ထွက်နေသည် ။ ကျားဆိုးသည် ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ စအိုပေါက်နီနီလေး ကိုလည်း မျက်စိကျနေသည် ။ နောက်ပေါက်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ နံမည်ကြီးတဲ့ ကျားဆိုးသည် ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရေဆေးငါးကြီးကို ချမ်းသာပေးလိမ့်မည် မထင် ။ လတ်တလောတော့ အင်္ဂါစပ်ကို သဲသဲမဲမဲ လိုးထည့်နေသည် ။ သူလိုးတာတွေကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း အရမ်း ကြိုက်နေသည် ။ သူ့ကို မရှက်နိုင်တော့ ..။
လို့ ထုတ်ပြောမိလိုက်သည် ။ ကျားဆိုးက အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဖိဖိ လိုးပေးတာ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း တအား ကောင်းလွန်းပြီး မကြာခင်ဘဲ တကိုယ်လုံး တုန်ခါ ကျင်တက်ပြီး ကာမပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိသွားသည် ။ ကျားဆိုးက သူ့လိင်တန်တဆုံး ထိုးစိုက် နှစ်ထားရင်း
“ အင်း..အင်း…တအား ကောင်းတာဘဲကွာ…”
လို့ ဖြေလိုက်သည် ။
“ ခင်ဗျား..ပြီးသွားပေမယ့် ကျုပ် မပြီးသေးဘူး..”
လို့ ကျားဆိုးက ပြောလိုက်တဲ့အခါ
“ မင်း..မင်းလည်း ပြီးအောင် လုပ်လိုက်လေ…”
လို့ ပြောမိလိုက်သည် ။ ကျားဆိုးက
“ ခင်ဗျားလည်း ဒီပုံစံနဲ့ လိုးရတာ ညောင်းနေမှာဘဲ.. ကဲ..ကျုပ်တို့ ပုံစံ တမျိုး ပြောင်းလိုးလိုက်ကြရ အောင်..”
လို့ ပြောလိုက်ပြီး အရင်းအထိ နစ်မြှုပ်ထားတဲ့ သူ့လိင်တန်ကို စွပ်ကနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ စောက်ခေါင်းထဲက လီးတုတ်တုတ်ကြီး ရုတ်တရက် ထွက်သွားတော့ ဟာတာတာကြီး ဖြစ် ကျန်ရစ်ရသည် ။
“ ကဲ..ကျုပ်က ပက်လက် အိပ်ပေးမယ်..ခင်ဗျား အပေါ်က တက်ခွပြီး လိုးပေး….”
လို့ သူက ပြောရင်း မွေ့ရာပေါ် ကို ပက်လက်လှဲအိပ်ချလိုက်သည် ။
“ လာ..လာ…ခွလိုက်..ဖင်ကြီးတွေကို ကြွထား..ကျုပ် သင်ပေးမယ်…နောက်ကျရင် အပေါ်က တက်ချရတာကို ခင်ဗျား စောက်ရမ်း ကြိုက်သွားမှာ.. ဟီးဟီး……”
သူ့အတန်ကြီးက ကြက်သီးတွေ ထရသည် ။ တုတ်တုတ်ခဲခဲ ရှည်လမျောကြီး…..။ သူ့ကိုယ်ပေါ် ခွတက်လိုက်တဲ့ အခါ သူက သူ့လိင်တန်ကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ စောက်ဖုတ်မှာ တေ့ပေးလိုက်သည် ။
“ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိထိုင်ချကြည့်….”
စောက်ဖုတ်ပေါက်ထဲကို လိင်တန်ထိပ်လုံးကြီး ဗျစ်ကနဲ ၀င်သွားလို့ ဖင်ကြီးတွေကို ကြွရင်း လန့်သွားသည် ။
“ ဖြည်းဖြည်း ထိုင်ချ…အင်း..ဟုတ်ပြီ..နောက်.. ဖင်ပြန်ကြွ…..ကဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြွလိုက် ထိုင်လိုက်…”
လိင်တန်တုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီး အပေါ်ကို ကြွလိုက် ဖိလိုက်နဲ့ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း အသားကျလာသည် ။ အတွင်း သား အိအိတွေကို တွန်းပွတ် တဲ့ အရသာက ဆိမ့်နေအောင် အရသာ ရှိလွန်းနေသည် ။
“ အင်း..ကောင်းတယ်…..ဟူး….တအား ထိတယ်……”
“ ခင်ဗျား ကောင်းတယ် ဆိုတာ ကြားရလို့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ…….ခင်ဗျား..ကျုပ်ကို မုဒိန်းကောင်လို့ ထင်သေးလား..”
တကယ်လည်း ကာမ အရသာတွေကို ပေးစွမ်းနေတဲ့ ကျားဆိုးကို မုဒိန်းကောင်လို့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း မထင်တော့ပါ ။ သူမ လိုလားနေတဲ့ ကာမအရသာတွေကို ဖြည့်စွမ်းပေးနေတဲ့ လူတယောက်လို့ဘဲ မြင်မိသလို ကာမပညာ တွေကို လက်တွေ့ကျကျ လက်ထပ်သင်ပေးနေတဲ့ ကာမပညာ ဆရာတယောက်လို့ ထင်မိ နေပြီ ။
ဒီလို အပေါ်က တက်ခွလုပ်ရတဲ့ ပုံစံနဲ့လည်း ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း နောက်ထပ် တခါ ပန်းတိုင်ကို တက်ရောက်သွားရပြန် သည် ။ ကျားဆိုးလည်း အရည်တွေ ပေရွှဲနေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးရဲ့ ဒစ်လုံးကြီးကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းကို စုတ်ခိုင်းပြန်သည် ။ ဒေါ် မိုးမိုးရှိန်းလည်း ကိုယ့်ကို နှစ်ကြိမ်တောင် ပြီးအောင် လိုးပေးခဲ့တာကို ကျေးဇူး တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ လိုလိုချင်ချင် ဘဲ စုတ်ပေးလိုက်ပါသည် ။
“ ခင်ဗျား နှစ်ကြိမ် ပြီးပေမယ့် ကျုပ် ခုထိ မပြီးသေးဘူးဗျာ…ခင်ဗျားရဲ့ စောက်ဖုတ်က တအား လိုးလို့ကောင်းရဲ့ သားနဲ့ ကျုပ် မပြီးသေးဘူး…..”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း သူ့ကို ဘယ်လို ကူညီရမလဲ မသိဘူး ။
“ ခင်ဗျား..ဖင်ကုန်းပေးအုံး…ကျုပ် ခင်ဗျားရဲ့ စအိုပေါက်လေးကို ကလိချင်တယ်….”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း စအိုပေါက်ကို ကလိမှာကို မကြိုက်ပေမယ့် သူ့ကို အလိုလိုက်တဲ့ အနေနဲ့ ဖင်ကုန်းပေးလိုက် ရပြန်သည် ။ သူက ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ဖင်ပေါက်ညိုညိုလေးထဲကို စောစောက သူ သူ့လိင်တန်မှာ လိမ်းသုတ်တဲ့ ဆီတွေကို နည်းနည်း လောင်းထည့်လိုက်သည် ။ ပြီးးတော့ ဖင်ပေါက်လေးကို သူ့လက်မနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း က လိပေးသည် ။
သူ့လက်မလေး ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ ကလိပေးနေသည် ။
” စိတ်ကို လျော့ထား.. တင်းမထားနဲ့..ဖင်တွေကို ထောင်စွင့်ထား……”
“ဟင်…မင်း….မင်း…ဖင်ထဲကို လုပ်မလို့လား . ..”
သူ့လီးထိပ်လုံး ဒစ်ပြဲကြီး စအိုပေါက်လေးကို တေ့လာလို့ အလန့်တကြား ပြောလိုက်တဲ့အခါ
“ ဟုတ်တယ်… ကျုပ် ခင်ဗျား နောက်ပေါက်ကို ဖွင့်မလို့….လျော့ထား လို့ ပြောတယ်နော်… လျော့ထား..ဒါဆို ခင်ဗျား ခံနိုင်လိမ့် မယ်….”
လို့ ပြောလိုက်တဲ့ သူ့အသံက နည်းနည်း မာလို့ မခံချင်ဘူး လို့ ငြင်းခဲ့ရင် သူ ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်မှာ စိုး လို့ အသာ ငြိမ်နေရသည် ။ သူ့လိင်တန်ကြီး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ စီးစီးကြီး ဖင်ပေါက်ထဲကို တထစ်ပြီ တထစ် ၀င်လာနေသည် ။
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် ကျားဆိုး ဖင်လိုးတာကို ခံနေရပြီ ။
“ အိုကေတယ် မဟုတ်လား….”
“ အင်း…..နောက်ကျရင် ခင်ဗျား… ဖင်ခံချင်စိတ်တွေတောင် ပေါ်ချင် ပေါ်လာမှာ…. ကြိုက်သွားလို့….”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း သူလုပ်သမျှ မျက်လုံး စုံပိတ်ပြီး ခံလိုက်သည် ။ သူ ဖိဖိလိုးရင်း သုတ်ရည်တွေ တထပ်ထပ် ဖင် ခေါင်းထဲကို ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း ပြီးသွားသည် ။
“ အား….အား…..ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖင်ပေါက်…… အိုး…….”
ကျားဆိုးသည် ခေါင်းကို မော့ပြီး ဖင်ထဲကို လီး တဆုံး ထိုးသွင်းထားရင်း အရသာ ခံနေသည် ။
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် မဲမှောင်နေတဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ အိပ်ခန်းလေးသည် ထောက်ကနဲ အသံနဲ့ မီးခလုပ် ဖွင့်လိုက် တာကြောင့် မီးရောင် ဖွေးဖွေးနဲ့ လင်းထိန်သွားသည် ။ ဖင်ရော အဖုတ်ရော ကျိန်းစပ်နေရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းသည် မီးရောင်စူးစူးကြောင့် လန့်နိုးသွားရသည် ။
“ ကျုပ် လီး တအား ပြန်တောင်နေပြီ….. လီးစုတ်ပေးမလား…….”
ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေတဲ့ သူ့လီးတန်ကြီးကို ငုံစုတ်ပေးရပြန်သည် ။ စုတ်နေရင်း စောက်ဖုတ် ထဲက ယားတက်လာသည် ။ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာသည် ။ တဖွားဖွား ကျနေတဲ့ ရေပန်းအောက်မှာ မျက်လုံးတွေ စုံပိတ် ရပ်ရင်း ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ပြန် စဉ်း စားနေသည် ။ ကာမကို အကြိမိကြိမ် အဓမ္မ ၇ယူသွားတဲ့ ကျားဆိုးရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို သာယာသွားတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အံ့သြမိနေသည် ။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို လိုလားတောင့်တလွန်းနေတဲ့ အချိန်မှာ သူက ရုတ်တရက် ရောက်လာပြီး ဒီလိုလုပ်တော့ သူလုပ်တာတွေကို သဘောကျသွားမိရသည် ။
သူကလည်း မုဒိန်းကျင့်တာနဲ့ မတူဘဲ အသက်ငယ်ငယ် ချစ်သူက ရည်းစားမမကို နွဲ့ဆိုးဆိုး ဗိုလ်ကျပြီး လိုတာတွေ အတင်းတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်သွားတာ ။ တညလုံး တချီပြီး တချီ ကျားဆိုးက လိုးတာ ။ လိုးလိုက် စောက်ပတ်ယက်လိုက် လီးစုတ် ခိုင်းလိုက်နဲ့ ။ လူတကိုယ်လုံးလည်း သူ့ပါးစပ် သူ့လျာနဲ့ ကင်းတဲ့နေရာ တလက်မတောင် မကျန်ဘူး ထင်တာဘဲ ။ မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်တယ်ဘဲ ဆိုပါတော့ ။ သူနဲ့စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ပစ်လိုက်သည် ။ သူ လုပ်ပေး တာတွေကိုလည်း စွဲသွားရသည်လို့ဘဲ ၀န်ခံရမှာပါဘဲ ။
ကျားဆိုး လာနမ်းပြီ လာကိုင်ပြီ ဆိုရင် ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း ခုံပြီး စိတ်တွေ ပါလာရော ။ သူ့ကို ငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ ခွန်အား မရှိဘူး ။ သူ့အနမ်း သူ့အကိုင်အထိ သူ့အပွတ်အသပ်တွေနဲ့ သူ့လီးချောင်းတုတ်တုတ် ရှည်ရှည်ကြီးကို ကြိုက်မိနေသည် ။ သူက သူ့မယားကျနေတာဘဲ ။ သူ့လီးကြီးကို တချိန်လုံး စုတ်ခိုင်း ယက်ခိုင်းနေတာဘဲ ။ ဒီကလည်း အပျိုကြီး ဖြစ်နေပြီး လီး ဆိုတာကို လိုချင်ရက်နဲ့ မရခဲ့တော့ လီးစုတ်ပေးရတာကို အရမ်း ကြိုက်မိနေသည် ။ ကျားဆိုးက ဘိုက်ဆာသည် ဆိုလို့ အစား သွား ၀ယ်လာပေးရသည် ။ အပြင်ထွက်ခါနီး
“ မမနော်…ရဲတွေ ပြန် ခေါ်မလာနဲ့…မမနဲ့ ချစ်လို့ မဝသေးဘူး . ..မမရော…ကျနော်နဲ့ ထပ် ချစ်ချင်သေးတယ် မဟုတ်လား…. မမနဲ့ကျနော်… သာယာတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေလို နေရာမှာ သွားပြီး တဝြကီး ချစ်ပစ်ချင်သေးတယ်ဗျာ….”
လို့ ပြောရင်းဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းရဲ့ ဖင်တုံးတွေကို အားရပါးရ ကိုင်နယ်သေးသည် ။ သူ့အတွက် ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ပြုတ်..နံပြားနဲ့ ပဲပြုတ်..လဖက်ရည်ကို ပါဆယ်သွားဝယ်လာပေးတော့ သူ စားလိုက်တာ အငမ်းမရဘဲ ။ တညလုံး လိုးခဲ့ရလို့ ဘိုက်ဆာနေ ပုံရသည် ။ အိမ့်ချို ဖုန်းဆက်သည် ။ သူ့ကို အိမ်ကို မလာဘဲ တရားရုံးကိုဘဲ လာဖို့ ပြောလိုက်ရသည် ။ ကျားဆိုး ရှိနေသည် မဟုတ်လား ။
မရမ်းကုန်း တရားရုံးမှာ ရုံးချိန်း ရှိနေတာမို့ အဲဒီမှာဘဲ ဆုံကြမယ် လို့ အိမ့်ချိုကို ပြောလိုက်သည်။ နို့နှစ်လုံးလည်း သူ ကိုင်နယ်ထားတာ စို့ထားတာကြောင့် နာကျင် ကျိန်းစပ်နေသည် ။ စောက်ဖုတ်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ ။ အကြိမ်ကြိမ် သူလိုးထားတာ ။ သူက အိမ်မှာ အိပ်ပြီး ကျန်ခဲ့သည် ။
“ မမ ..စောစော….ပြန်လာနော်…ဆိတ်သား ဒန်ပေါက် ၀ယ်ခဲ့…..”
လို့လည်း ကလေးတယောက်လို မျက်နှာပေးနဲ့ မှာလိုက်သေးသည် ။ မုဒိန်းမှု တရားခံပြေးတယောက်… ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲမှာ အိပ်ပြီး ကျန်ခဲ့တာကို သတင်းမပို့ဘဲ မသိ သလို နေနေမိတာမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ် ရှိသလို ခံစားနေမိရတာ တနေ့လုံးပါဘဲ ။ အိမ့်ချိုက
“ မမ.ဘာဖြစ်နေလဲ…မမ တခုခုတော့ ဖြစ်နေသလိုဘဲ …”
လို့ ပြောသည် ။ စိတ်က အိမ်ကိုဘဲ ပြန်ချင်နေမိသည် ။ ရဲမှူး ကျော်စွာအောင် ဖုန်းဆက်သည် ။ မုဒိန်းမှု တရားခံ ကျားဆိုး အချုပ်ကနေ လွတ်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောပြ သည် ။ ကျားဆိုးကို သူတို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားခံပြေး ဖမ်းဆီးရေး အထူးအဖွဲ့တွေက အပူတပြင်း လိုက်ရှာနေကြတယ်လို့ ပြောပြသည် ။
အိမ့်ချိုတို့နဲ့ နေ့လည်စား စားကြတော့လည်း ကျားဆိုးတယောက် ဘိုက်များ ဆာနေမလား လို့ တွေးမိလိုက်သည် ။ ငါ ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလိမ့်.. ဘာလို့ ဒီ လူဆိုးလေးကို သံယောဇဉ် ဖြစ်သွားမိရတာလဲ လို့ ပြန် ဆန်းစစ်ပြီး ငါ မှားနေပြီလား လို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားမိသည် ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး ။ သူ့ကို ရဲလက်အပ်လိုက်ဖို့လည်း ၀န်လေးနေသည် ။
“ လင်းသူကင်း အမှု ရုံးချိန်း ရှိတယ်နော်…မမ….”
လို့ အိမ့်ချိုက ဒိုင်ရာယီ စာအုပ်လေးထဲကို ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်သည် ။ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းလည်း အရင်ကဆိုရင် အမှုတွေကို ဘယ်လို လွတ်ပေါက်ရှာမလဲ.. ဘယ်နေရာမှာဟာကွက် ရှိမလဲ ဆိုတာတွေကို အမြဲ စဉ်းစား ပြင်ဆင်ထားလေ့ ရှိသည် ။ လတ်တလော ကျားဆိုးရဲ့ အဓမ္မ ကာမနဲ့ ကြုံလိုက်တဲ့ နောက်ပိုင်း သူမရဲ့ အမှုအခင်းတွေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေကို မလုပ်နိုင်ဘဲ ကျားဆိုးရဲ့ ကာမ အတွေ့အကြုံတွေကိုဘဲ ပြန်ပြီး စမြုံ့ပြန် မြင်ယောင် ကြားယောင် နေမိသည် ။
အင်း..ငါလည်း အရူး အမဲသား ကျွေးမိသလို … ဖြစ်နေပြီ ။ လင်းသူကင်းကို ထောင်ထဲက ထုတ်နိုင်ဖို့ လုံးပန်းရမည် ။ ဒါက အရင်ဆုံး အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ် ။ သူ့ချစ်သူ ရွက်လှပန်းဟာ အလိုတူ စပ်ယှက်တ.် ဆိုတာကို ရုံးရှေ့မှာ ပေါ်လွင်အောင် ပြသရမည် ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဥပဒေပညာရှင် တယောက် အနေနဲ့ ဒီအမှုက အသေးအဖွဲပါ ။ ဘယ်လို လွတ်မြောက်လမ်း ရှိ သည် ဆိုတာလည်း သိပြီးသားပါ ။
သို့သော် ဒီကနေ့ ခေတ်အခါ ကာလ သမယမှာ ပေါ့လို့ မရဘူး ။ ဥပဒေတတ်တိုင်းလည်း အမှု မနိုင်ဘူး ။ လူမတတ်..လဖက်ထုပ် တတ်သည် ဆိုတဲ့ စကားက တော်တော်လေး ခေတ်စားနေသည် ။ လူတွေက လိုင်းဝင်ကြတာ ဆိုတော့ တံစိုးလက်ဆောင် လဒ်လာဘကို မကြိုက်တဲ့သူ ဆိုတာကလည်း ခပ်ရှားရှား ။
“ မမ…ပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ..အိမ့်ချို….ဒုန့်ဝေါရီး ( စိတ်မပူပါနဲ့ ) ”
“ ရွက်လှပန်းက တော်တော့်ကို ရက်စက်တာဘဲနော်.. မမ…ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဖက်က မနေဘူး..မိဘတွေ ပြောစေချင် သလို ပြောပေးတယ်…”
“ အင်း..ဒါကြောင့်….လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား တွေဟာ ပြောင်းလဲတတ်တယ် ဆိုတာ အမြဲ ထည့်တွက်ထားရမယ်….အိမ့်ချို …. ခုတမျိုး တော်ကြာ တမျိုး ..”
စိတ်က အိမ်ကိုဘဲ ပြန်ချင်နေသည် ။ အိမ့်ချိုက ကျားဆိုး လွတ်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းကို စကားစလာသည် ။
“ မမ..ဟို မုဒိန်းကောင် လွတ်ပြေးသွားတာ အိမ့်ချိုတော့ တအား ကြောက်တာဘဲ….ညက မာမီတို့ကလည်း ပဲခူး က သူ့အမျိုးတယောက်ရဲ့ နာရေး ဆိုတော့ မသွားလို့ မဖြစ်လို့ တအိမ်လုံး သွားလိုက်ကြတယ်…မမရေ…. အိမ့်ချိုလည်း အိမ်မှာ တယောက်ထဲ….ဒီ မုဒိန်းကောင်များ ရောက်လာရင် အခက် သိလား….. သူ့အကြည့်တွေက အရမ်းကို တဏှာရမက်ကြီးတာဘဲ မမ..လျာကြီးလည်း ထုတ်ထုတ်ပြသေးတယ်…..”
“ သူက အိမ့်ချိုရဲ့ လိပ်စာကို ဘယ်လို သိနိုင်မှာလဲကွယ်.. စိတ်မပူပါနဲ့…”
လို့ နှစ်သိမ့်စကားလေး ပြောလိုက်ရသည် ။ ကျားဆိုးရဲ့ လျာကြီးက သူမရဲ့ ပေါင်ကြားနေရာကို အကြိမ်ကြိမ် ယက်ပြီးနေခဲ့ပြီ ဆိုတာကို အိမ့်ချို တယောက် သိများသိခဲ့ရင် ..ဘယ်လိုနေမလဲကွယ် . .။ တညလုံး ကျားဆိုးရဲ့ အကြမ်းလိုးတာတွေကို ခံထားရလို့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ပင်ပန်းနေသည် ။ မတတ်သာလို့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေ ပြီးတာနဲ့ အိမ်ကို ပြန်ချင်နေသည် ။ အိမ့်ချိုက အိမ်အထိ ကားမောင်း လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ လုပ်နေလို့ မလိုက်နဲ့တော့ ….မမဖာသာ မောင်း ပြန်လိုက်မယ် လို့ သူ့ကို ပြောပြီး အိမ်ကို အပြန်မှာ ကျားဆိုး တယောက် ဆာနေမှာဘဲ ဆိုပြီး ကြက်သားဒန်ပေါက် တဘူး ၀င်ဝယ်ခဲ့လိုက်သည် ။
အိမ်ကို ပြန်တော့လည်း ကျားဆိုးက ဘာတွေ လုပ်အုံးမယ် မသိဘူး ။ သူ့လီးတုတ်ကြီးကို စုတ်ခိုင်းမှာကတော့ အသေအချာဘဲ ။ ဒါတွေကို စဉ်းစားလိုက်တော့ ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ကြက်သီးတွေ ထသည် ။ အခန်းသော့ကို လှည့်ဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်တဲ့ အချိန် ကျားဆိုးများ အနောက်ကနေ တအား ဖက်လိုက်လေ မလား လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်မိလိုက်သည် ။ ဘယ်လို ဘယ်လို တရားခံပြေး တယောက်ကို ကိုယ့်ချစ်သူ တယောက်လို သဘောထားမိနေပါလိမ့် ။
ဟင်..ကျားဆိုးလည်း မရှိပါလား…..သူ..သူ…… သူ တနေရာရာမှာများ ပုန်းနေသလား မသိဘူး…..။ အိပ်ခန်းထဲကို ပြေး ၀င်ကြည့်လိုက်သည် ။ မရှိဘူး ။ အိမ်သာနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကိုလည်း ပြေးကြည့်မိသည် ။ ကျားဆိုး ကို မတွေ့တော့ ။ သူ..သူ….သူ…. သွားလိုက်ပြီ ။ ထမင်းစား စားပွဲပေါ်က သူ့အတွက် ကြက်သား ဒန်ပေါက် ဖေါ့ဘူးလေးကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်း ငေးကြည့်နေသည် ။
သူမ စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းနည်း သလိုလိုကြီး ဖြစ်နေသည် ။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး ။ အမှန်က သူမ ဘ၀သည် ကျားဆိုးနဲ့ မတွေ့ခင်က ဒီလိုဘဲ တယောက်ထဲဘဲ ရှိခဲ့တာပါ ။ ကျားဆိုးနဲ့လည်း တွေ့ပြီးရော အခုလို ကျားဆိုး တယောက် အိမ်ကနေ လည်း ထွက်သွားရော တယောက်ထဲ အရမ်း အထီးကျန်ဆန်သွားရသလိုကြီး ဖြစ်နေသည် ။
တနေကုန် နေပူကြီးထဲ ရုံးတွေ တရုံးပြီး တရုံး သွားခဲ့ရလို့ ရေချိုးချင်တဲ့ စိတ် ပေါက်လို့ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို တခုမကျန် အကုန်လုံး ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ ကျားဆိုးသာ ရှိမယ် ဆိုရင် သူကလည်း အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်ပြီး တောင်နေတဲ့ လီးကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ရေအတူတူ ချိုးဖို့ လိုက်လာမည်မှာ သေချာသည် ။
သူ့ကို မြင်ယောင်တော့ သူ့အထိအတွေ့တွေကို တမ်းတမိသွားသည် ။ ရေပန်းအောက်မှ ရပ်ပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်လို့ ရေချိုးနေတဲ့အချိန် သူ့ကို အရမ်းကို သတိရနေမိသည် ။ သူ့အထိအတွေ့တွေကို လိုချင်မိတာ အရမ်းပါဘဲ ။ အော်..ကျားဆိုး ဆိုတဲ့ ကောင်ဆိုးလေးရယ်..မင်း..ငါ့ကို ဝေဒနာတွေ ပေးခဲ့တာလား…။
နို့သီးလေးတွေက ဆွဲချေပေးမယ့်လူ မရှိလို့ တအားမာတင်းပြီး .ယားသလိုလို ဖြစ်နေကြသည် ။ လက်ချောင်းတွေက အလိုလို ဒီနို့သီးလေးတွေဆီကို ရောက်သွားကြသည် ။ ဖွဖွလေး ပွတ်ကြည့်မိသည်။ ကျားဆိုး ဆိုရင် အဲလို ဖွဖွလေး ပွတ်မှာလား ။ အငမ်းမရ စို့ပစ်လိမ့်မယ် ထင်တာဘဲ ။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားထဲက အမြောင်း တခုလုံးသည် အရမ်းကို ယားလွန်းနေသည် ။ ကျားဆိုးရဲ့ လျာကြီးကို အရမ်း သတိရ တမ်းတနေမိသည် ။
ပြီးတော့ ဖိသွင်းထည့်လိုက်မယ့် သူ့ဒုတ်မာမာတုတ်တုတ်ကြီးကို လွမ်းမိပြန်ရော ..။ ကျားဆိုးက မရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ အစားထိုးဖို့ လက်ဆောင် ရထားတဲ့ ရာဘာလီး အတုကြီးကို သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ဒီနေ့ညလည်း အိမ့်ချို အိမ်မှာ တယောက်ထဲ ။ အမေတို့က ပြန်မလာသေးဘူးတဲ့ ။ ဒီညလည်း ပဲခူးမှာဘဲ အိပ်ကြမှာ တဲ့ ။ ဒီနေ့ ဘယ်သူမှ မရှိလို့ အိမ့်ချိုလည်း လွတ်လပ်နေသည် ။ စာကြည့်စားပွဲက ကွန်ပြူတာမှာ Face Bookကို ၀င်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ စာတွေကြောင့် စိတ်တွေ ထကြွလာရပြီး၁၈+ စာတွေကို ဖတ်ချင်လာမိတာနဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် ကြောင့် ရောက်ဖူးသွားတဲ့ အတွေးပင်လယ်ပြာ ဖိုရမ်းကို သွားဖတ်လိုက်သည် ။
အဲဒီမှာ ညဆိုး ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စား လာပြီး ဆက်တိုက် ဖတ်လိုက်မိသည် ။ စိတ်ကြွဖွယ်ရာ အရေးအသားတွေကြောင့် အိမ့်ချိုသည် အိမ်နေရင်းဝတ် ဘောင်းဘီပွကြီးထဲကို လက်သွင်းပြီး ပေါင်ကြားက ရွှေကြုတ်ကို ပွတ်နေမိသည် ။
မိုးသသည်းတဲ့ ညတညမှာ လူဆိုးကောင်တွေ ရောက်လာပြီး အတင်း အဓမ္မ ကြံစည်တာတွေ ဖတ်ရင်း မုဒိန်းမှု တရားခံပြေး ကျားဆိုးကို သတိရ မြင်ယောင်လာသည် ။ လက် ချောင်းတွေကလည်း ရွှေကြုတ်အကွဲကြောင်း တလျောက်ကို ဖိကာဖိကာ ပွတ်နေမိသည် ။ အရည်တွေက အရမ်းကို ရွှဲစိုနေသည် ။ တခါတခါ ဒီစိတ်တွေ ဖြစ်လာရင် မနေတတ် မထိုင်တတ်အောင် ယားလွန်း ပြီး ယောက်ျား တယောက်ရဲ့ ကာမဆက်ဆံပေးတာကို အရမ်း လိုချင်မိရသည် ။
အိမ့်ချိုလည်း လာကြိုက်တဲ့ ဘဲတွေကို ရွေးလွန်းခဲ့လို့ အခု ရှေ့နေမ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘဲမရှိဘဲ ဖြစ်နေသည် ။ ဒီအချိန်မှာ အိပ်ခန်းထဲက ခြေသံလိုလို အသံသဲ့သဲ့တွေကို ကြားလိုက်မိသည် ။
အိမ့်ချို ကြက်သီးတွေ ဖျန်းကနဲ ထသွားသည် ။ မတ်တပ် ထ ရပ်လိုက်သည် ။ ငါ့အိပ်ခန်းထဲမှာ တယောက်ယောက် ရောက်နေလား…..။ အိမ့်ချို … သွားလည်း ကြည့်ချင်သည် ။ ကြောက်လည်း ကြောက်သည် ။ သူရဲခြောက်တာများလား ။ ပဲခူးမှာ အမျိုးကလည်း လောလောလတ်လတ် သေထားသည် ။ လာများ ခြောက်သလား မသိဘူး ။ စိတ်တင်းပြီး အိပ်ခန်းထဲကို လှမ်း ၀င်လိုက်သည် ။ ဘာမှ မရှိဘူး ။ စောစောက ခြေသံလိုလို ကြားလိုက်တာ သေချာသည် ။ ကြွက်များလား ။ ရေချိုးခန်းထဲက များလား …။
ရေချိုးခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်ကာ ကြည့်လိုက်သည် ။ ဘာမှ မရှိ ။ ဘာမှ မတွေ့ဘူး ။ စိတ်ထင်လို့ နေမှာပါ ။ ဝှူး….ဖီလင်ကောင်းနေတာလေးတောင် အပျောက်သွားသည် ။ ၁၈+ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်အဖုတ် ကိုယ် ပွတ်ပြီး ဖီလင်ယူနေတာ ။
“ ဟူး..ကျားဆိုးများ ရောက်လာသလားလို့ လန့်သွားတာဘဲ…”
ပါးစပ်က ထုတ်ပြောလိုက်မိသည် ။ ကုတင်ပေါ် ပက်လက် လှဲအိပ်လိုက်ရင်း ထမိန်လေး ဖြေလျော့လို့ စောစောက ဇာတ်လမ်း ပြန်ဆက်မလို့ လုပ်လိုက်သည် ။ မျက်လုံးစုံမှိတ်ထားရင်း စိတ်ထဲမှာ တိတ်တခိုး သဘောကျမိတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးခန်းက ဆရာဝန် ကိုလူချောကို မှန်းဆရင်း ပေါင်ကြားက ထရွနေတဲ့ အဖုတ်ကို စ ပွတ်မိသည် ။ ဒီ အချိန်မှာ အနံ့ တခု ရလိုက်သလိုဘဲ ။ ယောက်ျား ချွေးနံ့ ။ ဟင်း… ဘယ်ကလာတဲ့ အနံ့လဲ …။ အသက်ရှုသံလိုလို ကြားလိုက်သည် ။
“ ဟင် …”
မျက်လုံးတွေ ဖတ်ကနဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည် ။
လိပ်ပြာ လွင့်စင်သွားမတတ်..အသက်ရှု ရပ်သွားမတတ် ကြောက်သွားသည် ။ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားသွားသည် ။ ကျား…ကျားဆိုး…… ကျားဆိုးသည် သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အုပ်မိုးနေသည် ။ ပြုံးပြုံးကြီး စိုက်ကြည့်နေသည် ။
ကြောက်လွန်းလို့ စကားပြောလို့မရဘူး ဖြစ်နေသည် ။ ကျားဆိုး သည် တကယ်ဘဲ အိမ့်ချိုရဲ့ အနားကို ရောက်နေသည် ။ လက်ထဲမှာလည်း ချွန်ထက်တဲ့ သားလှီးဓါးကြီး တချောင်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားသည် ။
“ ဟိတ်…ချာတိတ်မ…..မအော်နဲ့…ပြန်လှန် မခုခံနဲ့… ဓါးနဲ့ ထိုးစိုက်လိုက်မှာနော်..တချက်ထဲ အသက်ပျောက်သွား မယ်….”
ကျားဆိုးရဲ့ အသံက မာသည် ။ ပြတ်သားသည် ။ ရုပ်က ကြောက်စရာ ကောင်းသည် ။ ရက်စက်မယ့် ပုံ ။ တကယ် လုပ်မယ့် သတ်မယ့် ထိုးမယ့် ပုံ နဲ့ ။
“ နင် စောက်ပတ် တအား ယားနေတာကို ငါ တွေ့နေတယ်…ဘာမှ မပူနဲ့..ငါ နင့်ကို စိတ်ကျေနပ်သွားရအောင် လိုးပေးမှာ….. ဟင်း……နင် တကယ် လိုချင်နေတယ် ဆိုတာ ငါ သိတယ် … နင်..လီးနဲ့ ကြုံဖူးပြီးပြီလားဟင်….”
အိမ့်ချို ခေါင်းရမ်းပြသည် ။
“ မေးရင် ဖြေ..ပါးစပ်က ဖြေ….တခါဘဲ ပြောမယ်.. နောက်တခါဆို နင် နာပြီမှတ်…”
ပါးတဖက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ရိုက်လိုက်ရင်း ကျားဆိုးက ဟောက်လိုက်လို့ အိမ့်ချို တုန်သွားသည် ။
“ ဖြေလေ…စောက်ကောင်မ….နင် လီးနဲ့ ကြုံဖူးပြီလား..”
“ ဟင့်အင်း မကြုံဖူးသေးပါဘူး…”
“ ဟား…အပျိုစင် ပက်ကင်လေးပေါ့….ဟုတ်လား….”
“ အို….ပက်ကင်ဆို ကျားဆိုးတို့က တအားကြိုက်….. ဟီး……နင်…နင်….ခရမ်းသီးတွေ ဘာတွေနဲ့ကော အာသာ ဖြေဘူးလား….”
“ ဟေ…..အင်း..မိန်းမတွေ..မိန်းမတွေ… အပြင်ဘန်းမှာတော့ ဒါကို စိတ်မ၀င်စား သလိုလိုနဲ့… အိမ်ထဲ ကြိတ်ပြီး ခရမ်း သီးနဲ့ ထိုး အာသာဖြေနေလိုက်ကြတာ…… ကဲ…ထမိန်ကို ချွတ်လိုက်စမ်း . . ”
အိမ့်ချိုလည်း သူ့ကို တအား ကြောက်ပေမယ့် ထမိန်ကို ချွတ်ရမှာတော့ မရဲဘူး ။
“ ဟာ..ချွတ်ဆို..ဘာ နှေးကွေးနေတာလဲ…..”
ကျားဆိုးက အိမ့်ချိုရဲ့ အိမ်နေရင်းဝတ် ထမိန် အနွမ်းလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။
“ အို . . ”
အိမ့်ချိုရဲ့ အောက်ပိုင်း တခုလုံး ဗလာကျင်းသွားသည် ။ ၀မ်းပျင်သား ရှပ်ရှပ်လေး ပေါင်တန်နှစ်ဖက် ဆီးခုံမို့မို့တွေ အကုန် ဘွားကနဲ ဖွေးကနဲ ပေါ်သွားသည် ။ ရှက်လွန်းလို့ အိမ့်ချိုရဲ့ လက်ကလေး နှစ်ဖက်က ပေါင်ဂွဆုံနေရာကို ကာလိုက်မိသည် ။ ကျားဆိုးသည် အမွှေးရေးရေး ပါးပါးလေး ရှိနေတဲ့ မို့ဖေါင်းတဲ့ ဆီးခုံဖေါင်းဖေါင်းကြီး ကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန် အိမ့်ချိုရဲ့ လက်ကလေးတွေက ဖုံးကာလိုက်လို့ စိတ်ဆိုးသွားသည် ။
“ ဟိတ်..လက် ဖယ်လိုက်စမ်း . . ”
“ အမလေး……ရှက်မနေနဲ့..ဒီည မင်းမှာ အရှက်ဆိုတာ ကုန်သွားရတော့မှာ…..”
လို့ ကျားဆိုးက ပြောလိုက်ရင်း အိမ့်ချိုရဲ့ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဖယ်ပစ်လိုက်သည် ။ ။
“ ပြန်မကာနဲ့နော်….ငါ….ပြောနေတယ်…ပြန်ကာဖို့ အုပ်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့….”
ကျားဆိုးသည် အိမ့်ချိုရဲ့ အကွဲကြောင်းကို သေသေချာချာ ကြည့်ရင်း သူ့အ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်နေသည် ။ အရင်ဆုံး ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက တီရှပ် အဖြူရောင်ကို ချွတ်သည် ။ နောက်တော့ ၀တ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည် ။ အ၀တ်မဲ့သွားတဲ့ ကျားဆိုးကို မကြည့်ရဲလို့ အိမ့်ချို ခေါင်းကို တဖက်ကို လှည့်ထားသည် ။ သူ့ပေါင်ကြားက အမွှေးမဲမဲထူထူတွေ ကြားထဲက ဒုတ်တန်ရှည် လမျောကြီးက ငေါငေါကြီး ထနေသည် ။
အိမ့်ချို ကြောက်လွန်းလို့ တုန်တောင် နေသည် ။ စိတ်ကူးနဲ့ ယောက်ျား တုတ်ကို မှန်းဆ လိုလားနေပေမယ့် တကယ်တမ်း ဒုတ်အစစ်ကြီးနဲ့ တွေ့ရပြီ ဆိုပြန်တော့လည်း တအား ကြောက်နေမိသည် ။ ဒီလို တုတ်လည်းတုတ် ရှည်လည်း ရှည်တဲ့ ဟာကြီးနဲ့ အဖုတ်ထဲ ကို သွင်းထည့်ရင် အဖုတ် ကွဲပြဲသွားလေမလား လို့ အရမ်း စိုးရိမ်သွားသည် ။
“ နင့် အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်စမ်း . . .”
ကျားဆိုးရဲ့ အသံက မာကျော ခက်ထန်လှသည် ။ အိမ့်ချိုသည် သူ့အကြောင်းကို သိထားသူ ဖြစ်သည် ။ သူ မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ကို ဒေါ်မိုးမိုးရှိန်းကေ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို မေးခဲ့တုံးကအိမ့်ချိုလည်း ဘေးနားမှာ ရှိခဲ့သည် ။ ကျားဆိုးရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တာတွေကို အကုန် သိခဲ့တော့သူ ခိုင်းတာကို ချက်ချင်းဘဲ လုပ်မိသည် ။
တုန်ရီနေတဲ့ လက်တွေနဲ့ သူမ အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။ အိမ့်ချို တကိုယ်လုံး အ၀တ်အစားမဲ့ သွားရပြီ ။ တသက်လုံး တခါမှ ယောက်ျား တယောက်ရဲ့ အရှေ့မှာ ဒီလို ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မနေဘူးခဲ့ ။ အခုတော့ အရှက် မရှိသလို နို့ကြီးတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်… အဖုတ်ကြီး ပေါ်လို့ ပက်လက်ကြီး ။ ကျားဆိုးက
“ ဟူး….နင့်နို့တွေက ဒီလောက် ကြီးမှန်း အင်္ကျီနဲ့တုံးကမသိသာဘူး ……..အာပါးပါး……. တကယ်လှတဲ့ဟာကြီးတွေပါလား . . .”
လို့ ချီးမွမ်းသလို ပြောလိုက်ရင်း သူ့လက်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့ အိမ့်ချိုရဲ့ နို့ကြီး နှစ်လုံးကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ဆုပ်နယ်ကြည့်နေသည် ။ ကျားဆိုးက နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ပေးတာတွေဟာ အိမ့်ချိုအတွက် ကာမစိတ်တွေကို စတင် ထကြွလာစေဖို့ အ စပျိုးခြင်းပါဘဲ ။ နို့သီးလေးတွေက မာတောင့်ပြီး စူထွက်လာကြသည် ။ ဒီ နို့သီးခေါင်း နီညိုညိုလေးတွေကို ကျားဆိုးက သူ့လက်မနဲ့ လက်ညှိုးတွေကို သုံးပြီး ဆွဲပေးနေတာက ကာမဖီလင်တွေကို ထကြွသထက် ထကြွ လာစေသည် ။
ကျားဆိုးက လက်တဖက်ထဲနဲ့ ဘဲ နို့ကြီးတးလုံးက နို့သီးခေါင်းလေးကို ကလိပေးနေပြီး သူ့ကျန်တဲ့လက်ကို အိမ့်ချိုရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကြားထဲကို ရွှေ့လိုက်သည် ။ မို့ဖေါင်းတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို ဖွဖွလေး စမ်းသပ်နေသည် ။ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား ထူထူနှစ်ချပ်က ကျားဆိုးရဲ့ လက်လည်း စမ်းလိုက်ရော စောက်ရည်တွေ ဒလဟော စိမ့်စို ထွက်ကျလာသည် ။
“ မင်း နံမည် အိမ့်ချို မဟုတ်လား . . .မင်းကတော့ မင်း လိပ်စာကို ငါ ဘယ်လိုသိလဲ လို့ သိချင်နေမှာဘဲ…. ငါက မင်းတို့ ထင်တာထက် ပို လျင် ပိုသွက်တယ် အိမ့်ချို..မိုးပြာပြာနဲ့ နိုင်နိုင်ဇော် ဆိုတဲ့ ကောင်မ နှစ်ကောင်က တကယ်တော့ လူမိသွားလို့ သူတို့ကို ငါတို့က မုဒိန်းကျင့်တယ် လို့ ပြောကြတာ.. သူတို့ မပြောလို့လည်း မဖြစ်တော့ဘူးလေ..ရပ်ကွက်က လူကြီးတွေက သိသွား တွေ့သွားတာကိုး…. တကယ်လို့သာ လူသူ မသိဘူး ဆိုရင် သူတို့လည်း လူရှေ့မှာ သူတို့ကို မုဒိန်ူကျင့်ခံရပါတယ် လို့ ထွက်ဆိုကြမှာ မဟုတ်ဘူး….မင်းဘဲ စဉ်းစားကြည့်.. မင်းကော ကျားဆိုးက တက်လိုးသွားပါတယ် လို့ တိုင်မှာလား…… ငါကလည်း..မင်းကို မုဒိန်းကျင့်သလို မလုပ်ဘဲ မင်း ကာမ လိုလားချက်တွေကို မင်း ကျေနပ်အောင် ဖြည့်ဆည်း ပေးမှာ.. မင်း ပါးစပ်လေးက ကိုကျားဆိုး ..လိုး ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာ ရှင်…..လို့ ပြောလာစေရမယ်… မင်းကော ငါက မုဒိန်းကျင့်တယ် လို့ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်မှာလား…..”
“ ဟင့်အင်း…..မ……မ……မ…….. မတိုင်ပါဘူး……”
ကျားဆိုး ရယ်လိုက်သည် ။ သူရယ်တဲ့ပုံက တချိန်က နံမည်ကြီး အဆိုတော် ပလေးဘွိုင်း သန်းနိုင် ရယ်တဲ့ အသံမျိုး လို့ အိမ့်ချို ထင်လိုက်သည် ။ ကျားဆိုးရဲ့ အဖုတ်ပေါ်က လက်က တရွေ့ရွေ့ ပြေးလွှားနေသည် ။ အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေသည် ။ ရသာဖူး အစိလေး ဆီကို သူ့လက်ချောင်းတွေက ရောက်သွားကြပြန်သည် ။
“ အ…..အ……….အင်း..အင်း . . . ”
“ ပေါင်တွေ ကားလိုက်စမ်း..အိမ့်ချို……မင်းကို ငါ ဘာဂျာ မှုတ်ပေးမလို့ …”
“ လက်နဲ့ကာဖို့ မကြိုးစားနဲ့….”
“ သူ့ရှေ့မှာ ပေါင်ကြီးကားပေးနေရတာ အိမ့်ချို ဘ၀မှာ အရှက်ကို ကုန်ရတာပါဘဲ ။ အရင်ဆုံး သူ့နှာခေါင်းထိပ်က အိမ့်ချိုရဲ့ ရသာဖူး အစိလေးကို လာထိကပ် လာသည် ။ ဒီအထိအတွေ့ကြောင့် အိမ့်ချို တုန်ခါသွားရသည် ။ အို….သူ…သူ…သူ…. ရှူနေသည် ..။
“ အိုး……ဒီညှီစို့စို့ အနံ့လေးက ငါ့လီးကို တင်းသထက်တင်း ထွားသထက် ထွားသွားစေတယ်… ကြိုက်တယ်…”
အိမ့်ချိုလည်း အကွဲကြောင်းတလျောက် သူ့နှာခေါင်းနဲ့ လိုင်းဆွဲ ပွတ်တိုက်တာကို ခံရလို့ ခါးလေး ကော့တက်ပြီး အို..အာ..အင်း…ဟင်း ဆိုတဲ့ အသံမျိုးစုံ ညည်းငြူမိရသည် ။